Golden Ball နဲ့ Ballon d'Or ဆုကို တစ်ပြိုင်နက်ရမယ့်သူ ပေါ်ထွက်လာမလား
(၃၆)နှစ်အတွင်း Golden Ball နဲ့ Ballon d’Or ဆုကို ပထမဆုံးအကြိမ် တစ်ပြိုင်နက်ရမယ့်သူ ပေါ်ထွက်လာမလား
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ကစားသမားကို ချီးမြှင့်တဲ့ Golden Ball ဆုနဲ့ ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု Ballon d’Or တို့ဟာ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားတဲ့ ဆုတွေထဲမှာ အပါအ၀င်ပါပဲ။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ရုရှားမြေကို ချီတက်ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေကလည်း Golden Ball ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်ကိုယ်စီနဲ့ပါ။ ထင်သလောက် အောင်မြင်မှုမရဘဲ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ၊ ချန်ပီယံဆုကို ကိုင်မြှောက်ခွင့်ရဖို့ လက်တစ်ကမ်းအလိုမှ အိပ်မက်တွေ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတဲ့ ထိပ်တန်းကစားသမားတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် ခရိုအေးရှားနဲ့ ပြင်သစ်တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Golden Ball ဆုအတွက် အဓိက ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့်ကစားသမားနှစ်ဦးကို လောင်းကစားဒိုင်တွေက လောင်းကြေးစတင်ဖွင့်လှစ်နေပါပြီ။ သူတို့ကတော့ ခရိုအေးရှားအသင်းရဲ့ ၀ါရင့်ကွင်းလယ်လူ မိုဒရစ် Modric ၊ ပြင်သစ်လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဘာပေ Mbappe တို့ပါပဲ။ ဒီကစားသမားနှစ်ဦးဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသင်းတွေအတွက် ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့သလို ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကိုင်မြှောက်နိုင်ဖို့အတွက် လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင် ထိပ်တိုက်ယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆု ရတဲ့သူက Golden Ball ဆုကို ရဖို့ နီးစပ်နေသလို နာမည်ကျော် ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းက ချီးမြှင့်မယ့် ၂၀၁၈ Ballon d’Or ဆုကိုပါ တစ်ပါတည်း ရယူနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာက ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ အီတလီဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး ပေါ်လိုရော့စီ Paolo Rossi က Golden Ball နဲ့ Ballon d’Or ဆုတွေကို (၁)နှစ်အတွင်း ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်သူမှ သူ့လိုမျိုး မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ ပေါ်လိုရော့စီဟာ ၁၉၈၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အီတလီအသင်းကို ဗိုလ်စွဲအောင် သွင်းဂိုးတွေနဲ့ စွမ်းဆောင်ခဲ့တာကြောင့် အဲဒီနှစ်မှာ စတင်ချီးမြှင့်တဲ့ Golden Ball ဆုအပြင် ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမား Ballon d’Or ဆု နှစ်ခုစလုံး တစ်ခါတည်းဆွတ်ခူးခဲ့တာပါ။
ဒီနှစ်မှာ မိုဒရစ်၊ ဘာပေတို့ Golden Ball ၊ Ballon d’Or ဆုတွေရဖို့ ရေပန်းစားနေပေမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေက အများကြီးပါပဲ။ Golden Ball ဆုအတွက် ကွန်တေ Kante ၊ ပေါ့ဘာ Pogba ၊ ဂရစ်ဇ်မန်း Griezmann ၊ ဟာရီကိန်း Harry Kane ၊ ဟာဇက် Hazard စတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရဖို့ရှိနေသလို Ballon d’Or ဆုအတွက်လည်း တခြားနာမည်ကြီးကစားသမားတွေနဲ့ အပြိုင်လုရဖို့ ရှိနေတယ်။
အဓိကကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo နဲ့ မက်ဆီ Messi ပါပဲ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ Ballon d’Or ဆုကို ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ကာကာ Kaka ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အဲဒီဆုကို စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီပဲ တစ်လှည့်စီ ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း ရီးယဲလ်နဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်(၃)ကြိမ်ဆက် ရခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက Ballon d’Or ဆုရဖို့ ‘တစ်’ပြေးနေတယ်။
ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ၊ ၂၀၁၈ Golden Ball ဆုကို ဘယ်သူရမလဲ၊ (၃၆)နှစ်အတွင်း Golden Ball နဲ့ Ballon d’Or ဆုကို ပထမဆုံးအကြိမ် တစ်ပြိုင်နက်ရမယ့်သူ ပေါ်ထွက်လာမလားဆိုတာကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်လိုက်ရအောင် . . .
ကမ္ဘာ့ဖလား Golden Ball ဆု ရရှိခဲ့သူများ
1982- Italy -Paolo Rossi
1986 -Argentina- Diego Maradona
1990 -Italy- Salvatore Schillaci
1994 -Brazil- Romário
1998 – Brazil- Ronaldo
2002 -Germany -Oliver Kahn
2006 – France- Zinedine Zidane
2010 – Uruguay- Diego Forlán
2014 – Argentina- Lionel Messi
နောက်ဆုံး(၁၀)နှစ်အတွင်း Ballon d’Or ဆုရရှိခဲ့သူများ
(၃၆)နှဈအတှငျး Golden Ball နဲ့ Ballon d’Or ဆုကို ပထမဆုံးအကွိမျ တဈပွိုငျနကျရမယျ့သူ ပျေါထှကျလာမလား
ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွနိုငျတဲ့ကစားသမားကို ခြီးမွှငျ့တဲ့ Golden Ball ဆုနဲ့ ဥရောပအကောငျးဆုံးဘောလုံးသမားဆု Ballon d’Or တို့ဟာ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာမွငျ့မားတဲ့ ဆုတှထေဲမှာ အပါအဝငျပါပဲ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကငျြးပရာ ရုရှားမွကေို ခြီတကျခဲ့ကွတဲ့ နာမညျကြျောဘောလုံးသမားတှကေလညျး Golden Ball ဆုကို ဆှတျခူးနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြအိပျမကျကိုယျစီနဲ့ပါ။ ထငျသလောကျ အောငျမွငျမှုမရဘဲ အိမျပွနျခဲ့ရတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ၊ ခနျြပီယံဆုကို ကိုငျမွှောကျခှငျ့ရဖို့ လကျတဈကမျးအလိုမှ အိပျမကျတှေ အဆုံးသတျခဲ့ရတဲ့ ထိပျတနျးကစားသမားတှကေိုလညျး ပရိသတျတှေ မွငျတှခေဲ့ပွီးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက နောကျဆုံးအဆငျ့ကို ရောကျရှိနပွေီဖွဈပွီး ဗိုလျလုပှဲအဖွဈ ခရိုအေးရှားနဲ့ ပွငျသဈတို့ ယှဉျပွိုငျကစားကွမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီနှဈပွိုငျပှဲရဲ့ Golden Ball ဆုအတှကျ အဓိက ယှဉျပွိုငျရမယျ့ကစားသမားနှဈဦးကို လောငျးကစားဒိုငျတှကေ လောငျးကွေးစတငျဖှငျ့လှဈနပေါပွီ။ သူတို့ကတော့ ခရိုအေးရှားအသငျးရဲ့ ဝါရငျ့ကှငျးလယျလူ မိုဒရဈ Modric ၊ ပွငျသဈလူငယျကွယျပှငျ့ ဘာပေ Mbappe တို့ပါပဲ။ ဒီကစားသမားနှဈဦးဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ သကျဆိုငျရာနိုငျငံအသငျးတှအေတှကျ ခွစှေမျးပွကစားခဲ့သလို ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကိုငျမွှောကျနိုငျဖို့အတှကျ လာမယျ့တနင်ျဂနှနေကေ့ရြငျ ထိပျတိုကျယှဉျပွိုငျရတော့မှာဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆု ရတဲ့သူက Golden Ball ဆုကို ရဖို့ နီးစပျနသေလို နာမညျကြျော ပွငျသဈမဂ်ဂဇငျးက ခြီးမွှငျ့မယျ့ ၂၀၁၈ Ballon d’Or ဆုကိုပါ တဈပါတညျး ရယူနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြရှိနပေါပွီ။ ဒါပမေဲ့ တဈခုရှိတာက ၁၉၈၂ ခုနှဈမှာ အီတလီဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး ပျေါလိုရော့စီ Paolo Rossi က Golden Ball နဲ့ Ballon d’Or ဆုတှကေို (၁)နှဈအတှငျး ဆှတျခူးခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ဘယျသူမှ သူ့လိုမြိုး မစှမျးဆောငျနိုငျတော့ပါဘူး။ ပျေါလိုရော့စီဟာ ၁၉၈၂ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အီတလီအသငျးကို ဗိုလျစှဲအောငျ သှငျးဂိုးတှနေဲ့ စှမျးဆောငျခဲ့တာကွောငျ့ အဲဒီနှဈမှာ စတငျခြီးမွှငျ့တဲ့ Golden Ball ဆုအပွငျ ဥရောပအကောငျးဆုံးဘောလုံးသမား Ballon d’Or ဆု နှဈခုစလုံး တဈခါတညျးဆှတျခူးခဲ့တာပါ။
ဒီနှဈမှာ မိုဒရဈ၊ ဘာပတေို့ Golden Ball ၊ Ballon d’Or ဆုတှရေဖို့ ရပေနျးစားနပေမေယျ့ စိနျချေါမှုတှကေ အမြားကွီးပါပဲ။ Golden Ball ဆုအတှကျ ကှနျတေ Kante ၊ ပေါ့ဘာ Pogba ၊ ဂရဈဇျမနျး Griezmann ၊ ဟာရီကိနျး Harry Kane ၊ ဟာဇကျ Hazard စတဲ့ကစားသမားတှနေဲ့ ယှဉျပွိုငျရဖို့ရှိနသေလို Ballon d’Or ဆုအတှကျလညျး တခွားနာမညျကွီးကစားသမားတှနေဲ့ အပွိုငျလုရဖို့ ရှိနတေယျ။
အဓိကကတော့ စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo နဲ့ မကျဆီ Messi ပါပဲ။ ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာ Ballon d’Or ဆုကို ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ ကာကာ Kaka ရခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး အဲဒီဆုကို စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီပဲ တဈလှညျ့စီ ယူနတောဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈမှာလညျး ရီးယဲလျနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျ(၃)ကွိမျဆကျ ရခဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒိုက Ballon d’Or ဆုရဖို့ ‘တဈ’ပွေးနတေယျ။
ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ၊ ၂၀၁၈ Golden Ball ဆုကို ဘယျသူရမလဲ၊ (၃၆)နှဈအတှငျး Golden Ball နဲ့ Ballon d’Or ဆုကို ပထမဆုံးအကွိမျ တဈပွိုငျနကျရမယျ့သူ ပျေါထှကျလာမလားဆိုတာကို ရငျခုနျစှာနဲ့ စောငျ့မြှျောလိုကျရအောငျ . . .
ကမ်ဘာ့ဖလား Golden Ball ဆု ရရှိခဲ့သူမြား
နောကျဆုံး(၁၀)နှဈအတှငျး Ballon d’Or ဆုရရှိခဲ့သူမြား